नेप्सेको हरियाली टिक्न सकेन, कारोबार रकम संगै शेयर बजार दोहोरो अंकले घट्यो
April 10, 2018 April 10, 2018 Aagan Post0Comments
साताको तेस्रो दिन नेप्से १७.५५ अंकले घटेर १२७०.२३ अंकमा आइपुगेको छ । कारोबार रकममा पनि भारि गिरावट संगै कारोबार रकम ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मा खुम्चिएको छ। कारोबार सुरु भए देखिनै घट्न थालेको शेयर बजार करिब ४५ मिनेटसम्म लगातार घटेको थियो। त्यस पछि केहि बढ्न थालेको नेप्से पुन पुरानै गतिमा फर्किदा यसदिन १६० कम्पनीको ३४ करोड ९० लाख ५१ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
पछिल्लो दुइ दिन को कारोबार को आधारमा, आइतबार ९१ कारोड ७७ लाख ८ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका थिए भने हिजो सोमबार १ सय ६९ कम्पनीको ९४ करोड ९६ लाख २९ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो ।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेर २ सय ७१ दशमलव २२ को बिन्दुमा आइपुगेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका ९ समूह मा नै रातोले रंगिएको छ। समूहगत रुपमा म्यनुफ़्यक्चर समूह अन्तर्गतका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यस समूहमा ३ दशमलब ०५ पतिशत ले घटेको छ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले पूँजीबजारमा भएको लगानी अनुत्पादक रहेको अभिव्यक्ति पछि , लगानीकर्ता को मनोबल कमजोर हुन जादा बजारमा खरिद चाप कम भइ बजार घट्न पुगेको शेयर जानकार बताउछन ।
यस अघि डा. युबराज खतिवडा पहिलोपल्ट अर्थमन्त्री भएपछी घरजग्गा, सेयर बजारमा लगानी बढ्न जादा अहिले को तरलता समस्या निम्तिएको बताएका थिए। बजारमा तरलता अभाबले पनि बजार बढ्न नसकेको नेप्से लाई अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले झनै सहयोग पुर्याएको थियो । हकप्रद, बोनस मार्फत सेयर बजारमा बढेको आपूर्तिले गर्दा पनि शेयर बजारलाई घटाउन सहयोग पुगेको छ । त्यसो त उनले भन्न खोजेको कुरा लगानीकर्ताले आफ्नै बुझाई अनुसार तोड मोड पारेको देखियो ।
यो संगै सामाजिक संजालमा उनको ब्यापक आलोचना एबं समर्थन भएको थियो ।
मंगलबार स्वोदेशी लघुवित्तका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। यस दिन लघुवित्तको शेयर करिब ७.९९ प्रतिसतले बढेको छ । यस्तै, उन्नति माइक्रो फ़ाइनान्स को शेयर मूल्य करिब ५.७८ प्रतिसतले बढेको छ ।
हाम्रो विकास बैंक का शेयर धनीले भने सबै भन्दा धेरै ७.५ प्रतिसतले गुमाएका छन् ।
बुटवल पावरको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन उक्त कम्पनिको १ करोड ३६ लाख ८९ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । हिजो मात्र बुटवल पावर कम्पनि लि ले आफ्नो शेयर धनीलाई २०७३/०७४ सालको संचित मुनाफाबाट चुक्ता पुजीको २० % का दरले नगद लाभाग्स दिने सूचना निकालेको थियो ।
त्यस्तै, नबिल बैंकको १ करोड १८ लाख ३० हजार९ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ।
← भरतपुर महानगर र मित्रराष्ट्र चीनस्थित सेन्ट्रल साउथ विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्य
प्राइम लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनि लि. को १६०% हकप्रदको मिति तय
February 21, 2018 Aagan Post 0
लाभकर वृद्धि खारेजीको माग गर्दे आन्दोलनमा लगानीकर्ता, नेप्से परिसूचक भने ५.११ अंकले घट्यो
June 4, 2018 Aagan Post 0